Apple inogadzirisazve iyo firmware yeiyo HomePod Mini kutora mukana weiyo napedyo chip U1 | IPhone nhau
Nezuro raive zuva rekuvandudza, takaona maburiro akaita Apple iyo itsva iOS 14.4, iyo itsva iPadOS 14.4, uye newowOSOS 7.3. Asi zvinoita sekunge kutenderera kwekuvandudzwa hakuna kumira ipapo. Uye ndezvekuti vazhinji venyu, nesu, tiri kutenga iyo nyowani HomePod Mini, mutauri akangwara anodhura kubva kuvakomana vanobva kuCupertino. Apple inoziva nezve kugamuchirwa kwakanaka kweichi uye nekuda kwechikonzero ichocho ivo vari kuzotarisa pazviri panguva ino ya2021. Chii chitsva: Apple ingo gadziridza iyo HomePod Mini software kune vhezheni 14.4 futi, inogadziridza inosvika tora mukana uzere weU1 chip.
Uye ndezvekuti mune ino kesi ndeye yekuvandudzwa iyo inotivigira inonakidza nhau, kunyanya nhau dzeavo kana iwe ukaona mashandiro avanokuita iwe unovada. Zvino, chero bedzi tine iPhone ine U1 chip, tinogona kuona kugona kweiyi napedyo chip. Tichava nehaptic, kurira, uye kutaridzika mhinduro kana "tichitumira" nziyo kuImba yePod Mini, kana isu tinogona kutoona sekunge nemashiripiti kudzora kwekutamba kunoonekwa pachiratidziri chedu patinosvika iyo HomePod Mini. Aya ndiwo manotsi ekuvandudza eiyi nyowani vhezheni yeiyo HomePod Mini software.
Iyo nyowani software vhezheni 14.4 inosanganisira kugadzirisa zvipuka uye zvinotevera zvinhu zvinoenderana nePambaPod nePhones zvakagadzirirwa neU1 (Ultra Wideband) chip.
Kurumidza chinja mimhanzi kune yako HomePod Mini (Bvisa) Kubva ku iPhone yako ne kutaridzika, kurira, uye mhinduro dzehaptic.
Gamuchira Mazano ekuteerera akasarudzika pa iPhone kana padhuze nePambaPod Mini ndiko kutamba mimhanzi.
ari Midhiya zvinodzora zvinongoerekana zvaonekwa pane iyo iPhone patino kiinura padhuze nePambaPod Mini.
Una gadziridza izvo pasina mubvunzo zvakakosha uye ndiyo yekutanga, sekutaura, iyo inotora mukana weU1 chip, tichaona maAirTags ... Saka ikozvino unoziva, kana iwe uine HomePod Mini, usazeze kugadzirisa chako chishandiso (kubva kuImba app unokwanisa kuzviita), kuti ugone kunakidzwa neaya ese nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple inogadzirisazve iyo HomePod Mini's firmware kutora mukana weU1 napedyo chip.
Podcast 12x16: iOS 14.4 uye iPhone 13